एमाले-माओवादी एकता टुङ्ग्याउन अर्को कार्यदल बनाउँदै छौंः नेम्वाङ (अन्तर्वार्ता) « NBC KHABAR
एमालेका प्रभावशाली नेता एंव पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पछिल्लो समय बनेको कार्यदलका सदस्य हुन्, जसले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार निर्माणमा सिट बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। निर्वाचन आयोगको काम कारवाहीबारे असन्तुष्टी जनाउँदै आएको एमालेका तर्फबाट नेम्वाङले मंगलबार आयोगका अधिकारीसँग छलफल पनि गरेका छन्। आयोगसँग एमालेको अपेक्षा र एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्थाबारे सुवास नेम्वाङसँग नेपालखबरका आकाश क्षेत्रीले गरेको वार्ताः
निर्वाचन सकिएको करिब डेढ महिनापछि निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नुभयो, किन भइरहेको रहेछ अलमल?
एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ। यही विषयमा आयोगले आफ्नो तयारीबारे हामीलाई जानकारी दियो। त्यो सिलसिलामा स्वभाविक रुपले आयोगले सरकारलाई गरिरहेको आग्रह जुन अहिलेसम्म पुरा भएको छैन, त्यसबारेमा पनि जानकारी गरायो। उदारहणका लागि प्रदेश प्रमुख नभइकन प्रदेशले काम गर्ने थलो चाहियो। त्यो थलो निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मा सरकारकै छ, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती पनि हुनुपर्यो। त्यो पनि सरकारकै जिम्मामा छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती भएपछी प्रदेशमा सांसदहरुले सपथग्रहण गर्न सक्ने भए। उनीहरूले राष्ट्रिय सभालाई मत हाल्नसक्ने स्थित प्राप्त गर्नसक्ने भए। त्यो सबै काम अहिलेसम्म सरकारले नगरेको असन्तुष्टी निर्वाचन आयोगले हामीसमक्ष व्यक्त गर्यो। त्यो जायज भएका कारण हामीले त्यसमा सहमती जनायौं।
निर्वाचन आयोगको काममा तपाईंहरुले असन्तुष्टी जनाउँदै आउनुभएको थियो, यो छलफलमा पनि त्यही त गर्नुभयो होला?
हामीले हाम्रा कुरा राख्यौं, उदारहणका लागि जनताको जनादेश आइसकेपछि त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। तर जनादेश आएको यति लामो समयसम्म त्यो जनादेशलाई दराजमा थन्क्याएर बस्नु ठिक होइन भनेर हामीले निर्वाचन आयोगलाई सुरुमै ध्यानाकर्षण गरायौं। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले आवधिक निर्वाचन भनेको छ। आवधिक निर्वाचन भनेको निश्चित मितिमा निर्वाचन, निर्वाचन हुनासाथ तुरुन्त मतगणना र परिणाम। निर्वाचन प्रक्रिया यसरी तार्किक निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म यो ढंगले निश्कर्षमा पुर्याउने काम भएको छैन। त्यसैले हामीले जनादेशलाई दराजमा थन्काएर राखिएको छ, यो ठिक होइन भनिरहेका छौं।
उसोभए निर्वाचन आयोगको कामप्रति तपाईंहरु अझै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
निर्वाचन आयोगलाई हामीले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं। निर्वाचन आयोगले यस विषयमा हाम्रो नेतृत्व गर्नुपर्छ र देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि आग्रह हो। उसले सरकारलाई झक्झक्या्उनु पर्छ। आवश्यक पर्यो भने हामीलाई पनि झक्झक्याउनु पर्छ। यसमा पहल र प्रयास गर्ने जम्मेवारी मूलतः निर्वाचन आयोगको हो।
यसबारे आयोगले के भन्यो त?
हामी एकदमै गम्भीर छौं, अगाडि बढ्छौं भन्ने प्रतिकृया आयो।
अर्को प्रसंग, एमाले–माओवादी पार्टी एकता अहिले कहाँ पुग्यो?
एकता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, अड्किएको छैन। एकताबारे दुई पार्टीबीच र आ–आफ्नो पार्टीभित्र पनि छलफल चलिरहेको छ। यो प्रक्रिया सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ। दुई पार्टीको बीचमा एकता हुन्छ भन्नेमा सबै विश्वस्त छौं।